Eve Energy Strip, oo ah xarig casri ah oo ka duwan | Wararka IPhone
Fiilooyinka korontadu waxay qayb ka ahaayeen nolosheena muddo dheer. Kororka jibbaarada ee tirada qalabka elektarooniga ah ee gurigeena ayaan u dhigmin koror saami ah tirada godadka la heli karo, iyo Ikhtiyaar kale uma lihin inaan ka isticmaalno xariiqyadan ku dhowaad gees kasta. Maanta waxaan ku tusineynaa xarig ka duwan kan loogu talagalay naqshadeynta, tayada qalabka iyo waxqabadka.
Eve Energy Strip waa xarig caqli-gal ah oo ku habboon HomeKit oo aad u baahan doonto inaad dhigto meel muuqata maxaa yeelay waxay leedahay naqshad aad u taxaddar badan, qalabka heerka koowaad, iyo sidoo kale waxaad ka xakameyn kartaa iPhone-kaaga, iPad-ka ama Mac-kaaga, adoo adeegsanaya Siri oo aad ku dhex-geli karto otomaatiyada iyo bay'adaha inaad abuurtay, iyadoo kaa caawinaysa inaad lacag ku keydiso biilka korontada.
1 Naqshadeynta iyo qalabka Premium
2 Is dhexgalka gurigaKit
Marinka tamarta ee Eve wuxuu ka duwan yahay isla marka aad ka soo saarto sanduuqa. Weligay weligay ma arag xarig aluminium ka samaysan oo ku dhammaaday. Sidaa darteed, waxay noqoneysaa qalab ku habboon haddii aad u baahan tahay inaad dhigto meel muuqata, sida miiskaaga. Aluminiumka anodized iyo midabka madow ee balaastigga ayaa ka dhigaya kaabis si fiican ugu habboon iMac-gaaga, tusaale ahaan. Laakiin maahan oo kaliya inay ku ekaato muuqaalka, waxay kusii socotaa faahfaahinta sida kala-goynta iyo isku xidhka saldhigyada, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku xirto seddex aalad iyadoon loo eegin sida ay u badan yihiin rogayaashu, ayadoon la is dhexgalin.
Saddexda daar ee yar yar ee hal dhinac ku yaal waxay u oggolaanayaan gacan ku haynta shaqsiyeed ee mid kasta oo ka mid ah saddexda saldhig, iyo sidoo kale waxaa lagu iftiimiyaa nalalka LED-ka si loo ogaado haddii furku shaqeynayo (shiday) ama aan ahayn (off). Fiilooyinka sidoo kale waa kuwo dhaadheer (190cm) sidaa darteed masaafada u dhow godka ugu dhow waa inaysan noqonin wax dhibaato ah.
Kaliya maahan naqshadeynta, laakiin sidoo kale waxay ku saabsan tahay tallaabooyinka ilaalinta ee lagama maarmaanka ah si aaladahaaga ku xiran fiilooyinka korantada ay si fiican u ilaashadaan. Waxay ka ilaalinaysaa culeyska xad dhaafka ah, wareegyada gaagaaban iyo kuwa korantada ku shaqeeya waxyeelo leh oo aakhirka kharriba qalabkaaga elektaroonigga ah ee qaaliga ah.
Is dhexgalka gurigaKit
Weli waxaan haysannaa tan ugu fiican: waafaqsanaanta HomeKit. Qalabkani wuxuu ka kooban yahay seddex xarig oo aad ku qaabeyn karto arjigaaga Guriga isla markaana aad ku dhex dari karto inta aad ku jirto shabakadda otomaatiga gurigaaga. Nidaamka qaabeynta waa mid aad u fudud (waxaad ku arki kartaa fiidiyaha) iyo halkaas fursadaha ay bixiso Eve Energy Strip oo aad u weyn, maaddaama aad ku dhexgeli karto deegaanno, otomaatig ah, ku xakameyso codkaaga iyada oo loo marayo Siri, ama iyada oo loo marayo barnaamijka 'iOS Home app', macOS.
Xaragada ayaa adeegsata tikniyoolajiyada Bluetooth si ay ugu xirto xaruntaada qalabka ee HomeKit, marka waa inaysan ka fogeyn, ama waa inaad isticmaashaa ku celceliyaha ay Eve sidoo kale iibiso oo aan ku falanqeynay booggeena dhowaan. Xaawa waxay la shaqeyneysay isku xirnaanta noocan ah muddo dheer, iyo mid ka mid ah dhibaatooyinka isticmaalka Bluetooth, dib u dhaca laga bilaabo markaad amarka bixiso ilaa aaladda ay ka jawaabeyso, kuma jiraan kiiskan, sida aad ku arki karto fiidiyowga. Jawaabtu waa mid deg deg ah laga bilaabo marka aad riixdo badhanka shaashadda iPhone-kaaga illaa inta suunka su'aashu daaran tahay ama damineyso.
Tani waa halka barnaamijka cajiibka ah ee Xaawa uu mar kale ciyaaro, oo bilaash ah oo loo heli karo macruufka (isku xirka), iyo tiro badan oo shaqooyin dheeri ah oo ay bixiyaan barnaamijka Home. Marnaba ka daali maayo ku celcelinteeda: Waa bedelka ugu fiican ee lagu heli karo dalabka macruufka ah ee iOS, xitaa haddii qalabka aad haysato uusan ka imaan magaca Eve. Xaaladdan oo kale, marka lagu daro xakamaynta iyo deminta, marka lagu daro otomaatiyada, iwm. Waxaan sidoo kale heli doonaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan isticmaalka qalabka lagu xiro fiilooyinka korontada.. Waxa ugu horeeya ee aan ubaahanahay inaan keydinaa waa inaan ogaanno waxa aan qarashgareyno, marka waa halka ay ka bilaabaneyso.
Fiilooyinka casriga ah waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee laga bilaabi karo HomeKit fursadaha ay na siinayaan awgood iyo bey'ada. Haddii aan tixgelinno in xariggan korontada ee Eve uu na siinayo saddex koronto oo hal aalad ah, xiisahaani waa mid saddex laab ah. Intaa waxaa dheer, waxay ku sameysaa naqshad aan caadi ahayn noocan ah qalabka, guud ahaan lagu qariyo gees. Eve Energy Strip waxay rabtaa in la soo bandhigo oo ay ku fariisato meel mudnaan leh miiskaaga. Naqshaddan, tallaabooyinka ilaalinta ee ay ka mid tahay iyo is-dhexgalka HomeKit, waxaan dhihi karnaa inay tahay aalad u gaar ah qaybteeda.. Tani waxay si cad u maleyneysaa inaysan laheyn qiimo jaban: € 99,95 Amazon on Amazon (isku xirka)
Qaabdhismeedka waasac ee ballaaran
Jawaab deg deg ah amarrada
Ma jiro dekedo USB ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Eve Energy Strip, oo ah xarig casri ah oo kala duwan
YouTube wuxuu ku darayaa taageerada HDR barnaamijkeeda iPhone 11
Kuwani waa ciyaaraha cusub ee lagu daray Apple Arcade